Laghachi ụzọ vs 250ok: Email Napụta Software na Ọrụ | Martech Zone
Gini mere o jiri buru ihe mwepu email? Dị ka Akuko Mgbasa Ozi Ogo Data Email nke 2015 site na Experian, 73% nke ndị ahịa kwuru na ha nwere nsogbu na nnapụta email. Laghachi ụzọ nwere kọrọ na ihe karịrị 20% nke ozi ziri ezi na-efu. Obi abụọ adịghị ya, ụlọ ọrụ achụmnta ego na-enwe nsogbu na nnapụta, nke ahụ na-emetụtakwa akara ala.
N'ihi na afọ, Returnzọ nlọghachi abụrụla onye ndu ụlọ ọrụ na oghere ịwepụta email na-enweghị nnukwu asọmpi, ma ọ bụrụ na ọ bụla. Na mbata nke 250ok, na ndị ahịa ndị ahịa nke gụnyere ụlọ ọrụ dị ka Adobe, Marketo, na Act-On, ụlọ ọrụ ahụ mechara nwee iwu ziri ezi ọzọ ka ịlaghachi athzọ maka deliverability software na ọkachamara ọrụ.
Debanye maka Ngagharị Ngwaahịa
Mgbe ị na-atụnyere Returnzọ nlọghachi na 250ok, isi okwu ato na - abia - Asambodo, Email Panel Data, na Ọrụ Ndị Ọrụ.
Weghachi athzọ Asambodo
Asambodo abụrụla ụzọ nri na butter maka afọ. Dabere na otu onye ahịa mbụ na ntanetị, ọ bara uru maka ịdị arọ ya na ọla edo. Taa, ntọala asambodo na-egosi na ndị ahịa email na-akwado mmemme email ha na omume kacha mma. Mgbe ha mechara ụkpụrụ mbụ ahụ, achọrọ ndị ahịa ka ha nọgide na-anọ n'ime usoro ndị ahụ n'oge niile ha nwere asambodo. Emeghị nke ahụ, dịka ị ga-atụ anya ya, na-ebute nsogbu mgbapụta.
Maka ndị ahịa ahụ na-anọ na metrics, ha kwere nkwa emelitere nnabata ozi-e nyeere AOL, Yahoo, Microsoft, Comcast, Cox, Cloudmark, Yandex, Mail.ru, oroma, SpamAssassin na SpamCop..
Isi Iyi: Oracle
Agbanyeghị, Director Global Deliverability Director na Oracle, Kevin Senne, kọrọ na ha nwere ihe atụ nke ndị ahịa Asambodo na-ekwenye ekwenye nwere nsogbu mgbapụta na ụfọdụ ndị mmekọ na-eweta ọrụ ịntanetị (ISP). Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịmara otu igbochi ugboro ugboro na ndị mmekọ ISP na-eme maka ndị ahịa na-ekwenye ekwenye, yana otu esi eme.
Dabere na Pathzọ, Gmail na-eme ọkara nke ọtụtụ ndepụta, yabụ Asambodo enyeghị teknụzụ ebe ahụ. Ha na-akọ na ndị ahịa asambodo na-eme nke ọma na Gmail karịa ndị na-ezighi ezi akwụkwọ, ihe ha na-ekwu maka ụkpụrụ omume kacha mma ha chọrọ ka ndị ahịa soro. Ozi ọma dị ebe a bụ na onye ọ bụla nwere ike ịgbaso omume kachasị mma na-enweghị akwụ penny ọ bụla na-ere ahịa, mana ịchọrọ ngwaọrụ ngwaọrụ iji nyochaa mmemme gị.
Yabụ, nnukwu ajụjụ maka ndị ahịa Asambodo bụ Ego ole ha nwere na ọpụpụ sitere na ịbụ onye na-ezigara ndị na-ezigara ọrụ ike na nkwalite teknụzụ enyere ndị mmekọ ISP. Maka ndị ahịa asambodo ugbu a, ịlele otu akụkụ n'akụkụ ga-ekpughe ole mbuli ha na-agbaso ịgbaso omume kachasị mma na nkwụnye ụgwọ-egwu ha na-enweta site na ndị mmekọ ISP. Ọ na-ewe mgbalị iji nwalee, mana data na-eme ka ndị ahịa mara na nha bụ isi ihe na-aga nke ọma.
250ok adịghị enye Asambodo. Approachzọ ha gbadoro ụkwụ na ịgbaso usoro kachasị mma, dị ka Return Path, mana kama ịkwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ, ha na-enye ndị na-ezipụ ozi oge dị mma iji jikwaa mmemme ha nke ọma ma nweta aha onye ziri ezi.
Weghachite Emailzọ Email Panel Data
Weghachi useszọ na-eji data obubọk email jikọtara ya na mkpụrụ ndepụta iji chọpụta nnyefe, mgbe 250ok na-eji nkpuru ahihia na data nnata.
Otu ihe nwere ike ịme data data panel bụ ma ọ bụrụ na ndị panelists mara nke ha a na-egwuputa data ma resikwa ya. Hà nyere ikike? Ọ bụrụ na ọ bụghị, nke ahụ ọ na-arụ ọrụ maka akara gị? Ọzọkwa, amaghị m mmalite mbido Return Path ma ọ bụrụ na ndị ọrụ kwenyere isonye, ​​yabụ biko jụọ ha.
Dịka onye na-azụ ahịa, enwere m mmasị na data panel nwere ike inye. Mana n'ihe banyere data nloghachi nke ụzọ azụ, ha akụkọ na naanị 24% nke ndị panelist na-eji akaụntụ ahụ dị ka akaụntụ email mbụ ha.
Mgbe ị na-emeso data panel nke ụdị ọ bụla, ọ bara uru ịjụ onye na-ere ahịa mgbe emelitere ikpeazụ panel ahụ. Survive Bias bụ nsogbu ị na-achọghị ịbanye na ngalaba gị. Ọzọ, lelee ya na ụzọ nlọghachi.
Banyere ntinye igbe, nsogbu ahụ na-abụkarị na data data ga-egosi ihe na-erughị 100% ntinye igbe na Outlook na Gmail n'ihi nzacha nke ndị ọrụ ọ bụla. N'ihi nke a, enwere ike ịhapụ ndị na-ezipụ ma ọ bụrụ na ọdịiche ntinye igbe na-akpata site na nzacha ọkwa onye ọrụ ma ọ bụ na enwere nsogbu nnweta.
250ok anaghị eji data panel eme ihe. Ọ bụ echiche ha na data ahụ nwere ike ịdabere na data ntinye aka nke ị nwere ike itinye site na 250ok's Email Informant, nke na-enye nkọwa zuru ezu, data ọrụ onye ọrụ, na mgbakwunye na nchịkọta nke onye na-enye ọrụ email gị (ESP) nyere. Ọ bụ ngwakọta nke ngwaọrụ ndị a ga-enye gị ọgụgụ isi email kachasị dị.
Laghachi ụzọ na 250ok Ọrụ Ọrụ
Ulo oru abuo a na enyere ndi ahia ahia. Isi ihe dị iche: Returnzọ nlọghachi wuru otu ndị ọkachamara, mgbe 250ok ahọrọla isoro ndị ụlọ ọrụ na-anapụta mpụga.
N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na-atụle ilaghachi ụzọ ma ọ bụ 250ok, ọ dị oke mkpa ịjụ ajụjụ siri ike nke onye ndụmọdụ ga-ejikwa akaụntụ gị. Maka m, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na mụ na onye na-ahụ maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta na-akpakọrịta. Needkwesiri onye nwere ọtụtụ afọ, ọ bụghị ọnwa, ahụmahụ, ha chọkwara mmekọrịta na isi ISP ma ọ bụrụ na achọrọ mmezi. Jụọ maka mmalite na ndị ahịa zoro aka nke onye ndụmọdụ ga-abụ onye ị na-ekwu. Rapagidesi ike na onye na-ahụ maka ndụmọdụ na-agụ site na edemede nwere ike ibute nnukwu nsogbu maka mmemme gị.
Nyochaa ngwa ngwa nke 250ok n'elu ikpo okwu
ebe ọ bụ na 250ok bụ ebe ikpo okwu ọhụụ na ebe ahụ, achọrọ m ikpuchi ngwa ngwa ha ngwa ngwa: Informant Reputation, Inbox Informant, Email Informant, Design Informant, na DMARC. Mgbe ị na-eji modulu anọ niile na egwu egwu, ndị na-ere ahịa nwere ngwa ọrụ zuru ezu iji napụta ha.
Onye na-aza aha ọma - Aha Informant gụnyere ụdị atụmatụ dị iche iche iji nyochaa aha email gị.
Otu n'ime akụkụ kachasị ewu ewu nke 250ok azịza ha bụ spam ọnyà network nke ihe dika 35 nde ngalaba. Tonweta data a bụ ihe na-enweghị isi maka ndị na-ere ahịa email. Nha na ogo nke ọnyà ọnyà spam, na ohere granular ịnweta data ahụ dị adị (dịka, ọnyà na-akụ ụbọchị, IP, ngalaba, usoro isiokwu, mba), na-amasị m nke ukwuu dị ka onye na-ezipụ. Nchịkọta nyocha ahụ? Nke a data dị na ezigbo oge, na ị nwere ike ịtọ alerti ahaziri iche ka ọ gbado anya na ndepụta ndị metụtara gị kachasị. Mgbanwe a na-eme na nhazi nke onye na-eme na njikere yana etu esi etinye ọkwa a (dịka, email, SMS).
Dashboard DMARC - N'ịtụle njupụta nke spam na phishing mbọ, na mmeghachi omume Gmail na nso nso a, ọ bụ ezigbo ụzọ maka 250ok ịgbakwunye DMARC dashboard. Nwere ike iji “ọnọdụ nleba anya” na sọftụwia ahụ ga - enyocha nnabata ma tụọ aro mmezi, nke ga - eduzi gị ma ọ bụ kwalite amụma. Ngwaahịa a gụnyere eserese egwu, akụkọ gbasara amụma, yana isi nnabata.
250ok na-enye ike ikpokọta gị nzaghachi aka (FBL). Knowingmara mgbe onye na-edebanye aha gị na-eme mkpesa banyere gị dị oke egwu, n'ihi na ọsọ nke nzaghachi gị bụ isi ihe na-eme ka ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) gbadata na aha gị.
Ọzọkwa, 250ok mejuputara Microsoft Smart Network Data Services (SNDS) na akara ngosi spam n'ime UI mgbaze mfe. Ihe omuma a sitere na Microsoft dika ihe ojoo, nke enweghi ihe omuma nke ihe omuma, ma ufodu ndi na ere ahia emeghi obere iji meziwanye ahuhu nke ieri data ahu. 250ok esiwo n'ụzọ ha mee ka ọ dị mfe.
Ozi Inbox - Ahịa chọrọ ọkaibe ezigbo oge ngwaọrụ iji nyere ha aka ịdata na igbe mbata. Ozi Inbox na-egosi gị ego ole n'ime akwụkwọ ozi gị rutere na igbe mbata, spam, na ole furu efu. Nwere ike imebi nsogbu email dị na mgbasa ozi, nke na-enye aka.
Otu n'ime ndị isi iche m chọpụtara n'etiti 250ok na ụzọ nlọghachi bụ onyinye mkpụrụ 250ok. Tupu ijide gị na ịtụle mkpuchi, naanị mkpụrụ ndị dị mkpa bụ ndị na-eweta igbe ozi ebe ị na-ezipụ ozi. Oge. 250ok wuru ngwa njikarịcha mkpụrụ osisi iji nyere gị aka ịnabata laser na ndị isi okwu ahụ. Na mkpokọta, enwere obere esemokwu na mkpuchi mkpụrụ na ụlọ ọrụ abụọ nwere ụfọdụ mkpụrụ osisi na-enweghị mkpụrụ, mana ebe ahụ ọ dị egwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi ọ bụla. Ulo oru abuo a nwere ihe ichoro ma obu nweta ya.
Ozi Email - Na ụwa nke data na-agbanye, imeghe na CTR anaghị akọ akụkọ zuru ezu. Leveraging 250ok si nsochi pixel na Email Informant na-agwa gị ndị debanyere aha na-agụ ozi na ogologo oge, na ụdị ngwaọrụ na sistemụ arụmọrụ ha na-eji.
Kedu njikọ njikọta ma ọ bụ CTA rụrụ nke kacha mma? Na-achọpụta oge izipu? Ozi Email na-enyere gị aka ịghọta ihe na-arụ ọrụ yana ihe anaghị eme ka ị nwee ike ịme amamịghe, ngwa ngwa.
Ihe ngosipụta - Onye ọ bụla na-ere ahịa ahịa ahịa kwesịrị ime ụfọdụ nyocha tupu ụgbọ elu gburugburu imewe, yabụ 250ok nwere njikọta n'ime igbe igbe na ndị na-ere nsụgharị na-eduga Email na Acid na Litmus.
Design Informant na-anwale ihe okike gị megide ihe nzacha spam ndị ọzọ gụnyere Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook, na ọtụtụ ndị ọzọ ka ị nwee ike ịchọpụta ma dozie ihe na-akpata spam tupu ị gbasaa mkpọsa gị.
Echere m na inwe ndị na-ere ahịa abụọ yiri ibe ha mana nke dịtụ iche na ebe ana - enyefe email bụ ihe dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n'ị na-azụ ahịa maka ngwanrọ ịnapụta, gụnyere ngwa DMARC, ma ọ bụ ọrụ ịgba izu, ana m akwado ka ị kpọtụrụ Return Path na 250ok maka ngosi, ma tulee onwe gị.
Daalụ maka ịgụ ihe ma ọ bụrụ na ị nwere nzaghachi ma ụzọ nlọghachi ma ọ bụ 250ok Ngwaahịa, biko nweere onwe gị ịkọrọ m ozi ahụ, ma ọ bụ kwuo okwu n'okpuru.
Ngosipụta: Oracle bụ ụghalaahia edenyere nke Oracle Corporation na / ma ọ bụ ndị mmekọ ya. Return Path bụ ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere nke Return Path, Inc. 250ok bụ ụghalaahia edenyere nke 250OK LLC. 250ok bụ ndị na-akwado saịtị anyị ma abụ m ezigbo enyi nke onye guzobere Greg Kraios.
Tags: androidgam akporo 2.3Gam akporo 2.3 email previewGam akporo 2.3 email preview ulegam akporo 4.2Gam akporo 4.2 email previewGam akporo 4.2 email preview uleNyocha email gam akporoNyocha ule nyocha gam akporoOzi AOLAOL na -eziga ChromeAOL mail preview email emailAOL mail Chrome lelee ule nyochaNlele ozi email AOL MailNyocha AOL Mail emailAOL Mail Internet ExplorerPreview email AOL Mail Internet ExplorerAOL Mail Internet Explorer nyocha nyocha emailAkwụkwọ ozi Apple 6Apple Mail 6 hụchalụ emailApple Mail 6 nyocha nyocha uleBlackberry 4 OsNlele email BlackBerry 4 OSBlackBerry 4 OS email preview uleBlackberry 5 OsNlele email BlackBerry 5 OSBlackBerry 5 OS email preview uleonye na-enye ihe ederedeIchie AnyaAgba ìsì email previewAgba ìsì email preview ulennapụtaDMARCozi igbochiozi nnapụta emailnyocha imewe emailonye ozi emaildata panel dataaha emailGmailNgwa GmailNlele ozi email GmailGmail App email preview uleIhe nchọgharị GmailNlele ozi Gmail ChromeNlele ule Gmail ChromeGmail FirefoxNlele ozi Gmail FirefoxGmail Firefox email preview uleGmail Internet ExplorerNlele ozi Gmail Internet ExplorerGmail Internet Explorer email preview uleGreg kraiosigbe nyochaonye ozi nnabatantinye igbeipadNlele email nke iPadNyocha email nyocha iPadmini miniiPad Obere nyocha emailiPad Mini email preview uleiPad RetinaNlele email iPad RetinaiPad Retina email preview uleiPhone 4siPhone 4s nlele emailiPhone 4s email preview uleiPhone 5Nlele email nke iPhone 5iPhone 5 email preview uleiPhone 5siPhone 5s nlele emailiPhone 5s email preview uleiPhone 6Nlele email nke iPhone 6iPhone 6 email preview uleiPhone 6 PlusNlele ozi iPhone 6 PlusiPhone 6 Plus nyocha nyocha emailnnyefe ispnnwale email isplitmusNkọwa Lotus 6.5Lotus Notes 6.5 nlele emailLotus Notes 6.5 email preview uleNkọwa Lotus 7Lotus Notes 7 nlele emailLotus Notes 7 email preview uleNkọwa Lotus 8Lotus Notes 8 nlele emailLotus Notes 8 email preview uleNkọwa Lotus 8.5Lotus Notes 8.5 nlele emailLotus Notes 8.5 email preview uleMAC OS XNlele email MAC OS XMac OS X email preview uleMICROSOFT WINDOWSMICROSOFT WINDOWS nlele emailMICROSOFT WINDOWS nyocha nyocha emailOutlook 2000Nlebanye anya nke Outlook 2000Nlere ule nyocha nke Outlook 2000Outlook 2002Nlebanye anya nke Outlook 2002Nlere ule nyocha nke Outlook 2002Outlook 2003Nlebanye anya nke Outlook 2003Nlere ule nyocha nke Outlook 2003Outlook 2007Nlebanye anya nke Outlook 2007Nlere ule nyocha nke Outlook 2007Outlook 2010Nlebanye anya nke Outlook 2010Nlere ule nyocha nke Outlook 2010Outlook 2011Nlebanye anya nke Outlook 2011Nlere ule nyocha nke Outlook 2011Outlook 2013Nlebanye anya nke Outlook 2013Nlere ule nyocha nke Outlook 2013Outlook.com (Firefox)Nyocha Outlook.com (Firefox)Nlebanye anya nke Outlook.com (Firefox)ChromeNyocha email Outlook.com ChromeOutlook.com Chrome nyocha preview uleInternet ExplorerNyocha email Outlook.com Internet ExplorerNleba anya nyocha Outlook.com Internet ExplorerEderede ederedePlain Text preview emailPlain Text email preview uleezi ozilaghachi ụzọlaghachi ụzọ ọzọlaghachi ụzọ asambodoọnyà spamspam ọnyà networkspam na-ebuteThunderbird kacha ọhụrụ WEB-BASEDThunderbird kachasị ọhụrụ WEB-BASED preview emailThunderbird kacha ọhụrụ WEB-BASED nyocha preview emailWindows 8 Windows PhonePreview email Windows ekwentị 8Windows Phone 8 email preview uleYahoo! Ozi ChromeYahoo! Zipu ozi nlele email ChromeYahoo! Mee nyocha ule nyocha ChromeYahoo! Ozi FirefoxYahoo! Ozi nyocha Firefox MailYahoo! Ozi nyocha Firefox emailYahoo! Ozi Internet ExplorerYahoo! Zighachi ụzọ nyochaa Internet ExplorerYahoo! Mee nyocha nyocha nyocha email Internet Explorer
Ọkt 7, 2014 na 2:35 PM
Nnukwu ngwá ahịa ahịa email ọhụrụ, echere m na ndị mmadụ ga-eju anya site na email ozugbo ha nwere ike inweta data ka mma.
Onye sayensị sayensị siri ike
Aug 16, 2016 na 10:47 PM
Ọfọn nke ahụ gburu iwu ziri ezi nke post a "250ok bụ ndị na-akwado saịtị anyị ma abụ m ezigbo enyi onye guzobere Greg Kraios"
Aug 17, 2016 na 10: 02 AM
Ee, abụ m ndị enyi Greg onye nwere ọhụụ a ihe karịrị afọ iri gara aga ma ugbu a na nnukwu ụlọ ọrụ na-eji asọmpi ahịa. Enwere m mpako inye aka ịgbasa okwu ahụ na ngwọta ya dị ịtụnanya. Enwere m nnukwu ekele maka ndị na-akwado anyị na-akwado saịtị a ma nyere m aka ịmatakwu ndị na-agụ akwụkwọ anyị. Ngosiputa ihe bu uzo ma kwesiri ka oja ya, ghara ikwusi ya site na onye obula onye na-achoghi aha ya nke na-atu ujo inye ezigbo aha ma obu adreesị ozi-e.
Aug 17, 2016 na 11: 11 AM
Ndị ahịa ọ bụla Cert ọzọ ebe a na-egbochi igbochi ndị mmekọ Return Path? Na ekele maka nghọta, Douglas! Cheta, ọ dịghị ezi omume ọ bụla anaghị ata ahụhụ. 😉
Joanna Roberts kwuru
Aug 17, 2016 na 11: 45 AM
Douglas, daalụ maka edemede ahụ; Ekwenyere m na ọ dị mkpa ịmara maka nhọrọ gị mgbe ị na-ahọrọ onye inyefe gị. Otú ọ dị, enwere m nchegbu na ị nweghị ike iwepụta ọnọdụ a na-enweghị atụ na ntụnyere gị ebe ị nwere mmekọrịta ọkachamara na nke onwe gị na 250ok, dịka e kwuru na nkwupụta gị. Achọkwara m ọtụtụ ajụjụ n'ime nyocha gị nke Returnzọ Mlaghachi, ma enwere m mmechuihu na ị bịaghị bịakwute anyị iji nyere aka mejupụta oghere ndị ahụ. Dịka onye njikwa azụmaahịa maka azịza Email Optimization anyị, agara m - ma m ka na - enwe obi ụtọ inyere gị aka ịza ajụjụ ndị ahụ.
Iji zaa otu n'ime ajụjụ gị - ee, ndị otu Kọmitii Ndị Ahịa anyị nyere nkwenye iji weghachi ụzọ iji nweta igbe ozi igbe ha na data njikọta. Obi dị m ụtọ ịnyekwu ozi na nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Na Returnzọ Mlaghachi, anyị nwere nnukwu obi ụtọ maka data pụrụ iche anyị nwere ike ịme ngwọta anyị yana nghọta data a na-enye ndị ahịa anyị. Anyị maara na nghọta ndị data na-eweta dị mkpa iji mee ka ihe ịga nke ọma na ịzụ ahịa ahịa email, ọ dịkwa mkpa na ndị na-ere ahịa na-eme mkpebi dabere na data sitere n'aka ndị debanyere aha ha n'ezie. Anyị nwere obi ike na-ekwu na ndị na-ere ahịa email bụ ndị chọrọ n'ezie ịmalite mmemme email ha ma hụ ROI dị mma site na email ga-erite uru site na ịmekọrịta na Return Path. Dị ka i kwuru, anyị nwere data, mmekọrịta ụlọ ọrụ, yana ọkachamara ozi email nwere ike inyere ndị ahịa aka ịbawanye ego ha na-enweta site na email site na ime ka ozi email ha dịkwuo elu, iwulite mmekọrịta ndị ka mma, na ịchekwa ozi ịntanetị ha maka itinye aka na mmelite.
Aug 17, 2016 na 11: 52 AM
Daalụ maka iwepụta oge iji ruo. O doro anya na obosara, iru, na ụzọ nke Returnzọ Ntugharị enwuala n'ụlọ ọrụ mgbapụta. Daalụ maka ịkọwapụta okwu ịnweta data yana.
Asọmpi na-adị mma mgbe niile, ma na anyị ejirila ngwa ọrụ 250ok maka ESP nke anyị, ihe anyị rụpụtara masịrị anyị nke ukwuu. Yabụ mgbe m bụ enyi na ha bụ ndị nkwado, anyị bụkwa ndị ahịa na ndị na-eji usoro ha eme ihe. Nzaghachi a na ikpo okwu abughi ihe na-adighi nma - agaghi m eme akwukwo maka ikpo okwu nke m na-ejighi aka ya.
Dec 5, 2016 na 12:02 PM
Dika onye okacha amara na France, o juru m anya na ichoro ka RP meziwanye oru oma na Orange. Orange anaghị eji Asambodo RP.
Dee 6, 2016 na 4: 21 AM
Ee ha na-eme: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
Dec 18, 2017 na 2:05 PM
Achọrọ m ịma banyere ịnye ọnụahịa. M na-eji 250ok eme ihe ugbu a, mana enwere m obi abụọ ịgafe usoro ngosi na-enweghị opekata mpe mara njikọ ọnụego metụtara n'etiti 250ok na ụzọ nloghachi